अन्तवर्ता Archives - Sawal Nepal
केही दिनदेखि हवाई आक्रमण गरिरहेको इजरायलले विद्रोही समूह हमासको नियन्त्रणमा रहेको गाजा क्षेत्रमाथि जमिनबाट पनि आक्रमण थालेको छ। इजरायली सेनाले जमिनमा रहेका सैनिकहरू पनि गाजामाथिको हमलामा जोडिएको जानकारी दिएको छ। ‘इजरायली रक्षा बलका हवाई र स्थल सैनिकहरूले गाजा क्षेत्रमा आक्रमण गरिरहेका छन्,’ सेनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। इजरायली सैनिकहरू गाजा क्षेत्रमा प्रवेश गर्न लागेको
चिलीमा एक महिलाले कोरोनाकाल आफ्नो नक्कली मृत्युको झूटो अन्त्येष्टि गराएकी छन् । यस अवसरमा उनले आफ्ना इष्टमित्रलाई भेला पारेर रुन समेत लगाइन् । नक्कली अन्त्येष्टिका लागि उनले एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिन् । राजधानी स्यान्टियागोमा बस्ने ५९ वर्षीया मायराले विगत केही महिनायता कोरोनाका कारण धेरैजना मरेको देखेर आफ्नो अन्त्येष्टिका बारेमा सोच्न थालेकी थिइन् ।
उत्तर भारतमा गङ्गा नदीको किनारमा कम्तीमा ४० वटा शव फेला परेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। कसरी ती शव नदी किनारमा पुगे भन्ने विवरण स्पष्ट भएको छैन, तर स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले ती कोभिड बिरामीहरूको हुनसक्ने जनाएका छन्। महामारीको प्रभाव? भारतको उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यको सिमानामा नदी किनारमा ती शव फेला परेको सोमवार बीबीसीले जानकारी पाएको छ। कतिपय
गण्डकीमा बुधबार जे–जस्तो गतिविधि भए, त्यसमा जनमोर्चाका एक सांसद खिमविक्रम शाही जोडिएका छन्, तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ? एमालेले नांगो प्रदर्शन गरेको छ । मान्छे अस्पतालको आइसियूमा छ, भेट्न दिइएको छैन । हाम्रो साथीहरू भेट्न जाँदा पनि भेट्न दिनुहुन्न भनेर रोकिएको छ । त्यहाँ अस्पतालमा मिलेमतो कति छ, त्यो त भोलि थाहा होला । यसबारे हामीले पनि खोजिरहेका छौँ ।
विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारमा जाने विषयमा एउटै प्रश्न दोहोर्‍याएपछि पत्रकारसँग रिसाएका छन् ।तत्कालीन देउवाको कार्यसमितिमा नेविसंघ उपाध्यक्ष रहेका कांग्रेस नेता अशोक कोइरालाको निधनमा श्रद्धाञ्जलि तथा परिवारलाई समवेदना दिन मंगलबार विराटनगर पुगेका देउवालाई विमानस्थलमा पत्रकारहरुले ‘कांग्रेस सरकारमा कहिले जान्छ ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । पत्रकारको पहिलो प्रश्नमा देउवाले भने, “कांग्रेस विपक्षी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले सबै प्रकारका वनको संरक्षण, प्रबन्ध, विकास, प्रतिफललगायत विषयमा ध्यान दिएको बताए। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालको आठौँ राष्ट्रिय परिषद्को उद्घाटन समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले वन र वातावरण क्षेत्रमा अध्ययन गरेर मात्र कदम चाल्ने बताए। परिषद्ले छलफल गरी वन तथा वातावरण क्षेत्रका विविध पक्षमा महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल्ने विश्वास व्यक्त
प्रधानमन्त्रीलाई धक्का लागेको छैन,प्रचण्ड-माधवले खाएको लड्डु तितो हुन्छ :महेश बस्नेत (भिडिओसहित)
काठमाडौं, १३ फागुन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहका प्रभावशाली नेता महेश बस्नेतले सर्वोच्च अदालतले संसद पूनःस्थापना गर्ने गरेको फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिलाई कुनै धक्का नलागेको टिप्पणी गरेका छन् । प्राइम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री ओलीको
काठमाडौं, ८ माघ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले माधव नेपालले ‘मलाई र प्रचण्डजीलाई’ जेल हाल्ने तयारी भएको छ भनेर गरेको दाबीमा कुनै सत्यता नभएको भन्दै त्यसलाई बेकारको कुराको संज्ञा दिएका छन् । हिजो राति प्राइम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै मन्त्री त्रिपाठीले यस्तो बताएका हुन् ।
काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू संविधानको कुन धाराअन्तर्गतको प्रधानमन्त्री हो स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका छन्। नेकपा दाहाल-नेपाल पक्षका विद्यार्थीहरूले आयोजना गरेको उपत्यका स्तरीय कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै रावलले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। ‘प्रधानमन्त्रीजी, तपाईं नेपालको संविधानको कुन धारा अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री हो?,’ उनले प्रश्न गरे। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटनको
‘नेपाल आइडल’बाट चर्चामा आएकी गायिका अस्मिता अधिकारीका पछिल्लो समय सुपरहिट गीत दर्जन बढी छन् । ‘तिम्रो मायाले बाँधेर राख’, ‘साली मनपर्यो’, ‘आँखामा बसाउँ मलाई’, ‘लज्जावती झार’, ‘माया गरौंला’ जस्ता हिट गीतकी गायिका अस्मितासँग अनलाइनखबरले गरेको रमाइलो कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः बिहान कति बजे उठ्नुहुन्छ ? ढिलो उठेँ भने ६ बजे, नत्र ५ बजे निन्द्रा